घण्टाकर्ण पर्वको मिथक र यथार्थ – eratokhabar
घण्टाकर्ण पर्वको मिथक र यथार्थ
ई-रातो खबर २०७४, ३० साउन सोमबार ०१:०१ August 14, 2017 3309 Views
हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि नेवार समुदायले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरसहित नेवार बहुल क्षेत्रमा साँझपख गथामुग (घण्टाकर्ण पर्व मनाएका छन् । नेवार समुदायले गथामुगलाई समाजमा दुःख दिने पात्रका रूपमा चित्रण गर्दै दोबाटो चौबाटोमा लगी जलाएर यो पर्व मनाउने गर्दछन् । सर्वसाधारणले गथामुगलाई पिचासको संज्ञा दिन्छन् । गथामुगलाई बच्चाहरू मारेर खाने राक्षसका रूपमा चिनिन्छ ।
परालको गथामुग आकृति जलाएर त्यसको खरानीको टीका बच्चाहरूलाई लगाइदिने र राख नाघ्न लगाउने गरिन्छ । त्यसो गर्दा बालबालिकाको डर हराउने, रुन्चे घट्ने नेपाल रोग (कुपोषण) हट्ने जनविश्वास छ । गथामुग नामको कथित राक्षस स्त्रीलिङ्गी हो कि पुलिङ्गी ? त्यसमा एकरूपता देखिन्न । भक्तपुरमा नारी आकृतिको गथामुग पनि मनाउने चलन भने घट्दै गएको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन् । भक्तपुर २, ब्यासीमा पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी दुईटै गथामुगलाई एकसाथ जलाउने गरिन्छ । ‘पहिले भक्तपुरका धेरै स्थानमा पुलिङ्गी र स्त्रीलिङ्गी गथामुगसँगसँगै बनाएर दोबोटो चौबाटोमा दहन गरिन्थ्यो । तर अहिले भक्तपुर नपा २ ब्यासीमा मात्रै यसले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । “गथामुगलाई बस्तीबाट पर दोबाटो चौबाटोतिर सेलाउन लग्दै गर्दा अनेकौँ अश्लील गाली गलौजसमेत गरिन्छ”, संस्कृतिविद् ओमप्रसाद धौभडेल भन्छन् ।
आजभोलि संस्कृतिविद्हरूले गथामुगबारे फरक धारणा राख्न थालेका छन् । यसलाई भैरव र अन्य देवताको प्रतीकका रूपमा हेर्न थालिएको छ । संस्कृतिविद् धौभडेलले घण्टाकर्णको भौतिकवादी व्याख्या गर्न खोजेका छन् । उनले गथामुग अन्य देवीदेवताको नाम सुन्न नचाहने नास्तिक, सुनलाई भन्दा फलामलाई महत्व दिने व्यक्ति र भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गर्ने पात्र’ भनेका छन् । “विशेषगरी देवीदेवताको नाम सुन्नुपर्ला भनी हरहमेसा आफ्ना कानमा ठूलठूला घण्टा झुन्ड्याइराख्ने भएर उनको नाम घण्टाकर्ण भएको हो”, धौभडेलको भनाइ छ । घण्टाकर्णको इतिहास काठमाडौँमा शासन गरेका गोपालवंशी कालको पौराणिक कथा मानिन्छ । नेपाल संवत् ७९२ मा नेपालभाषाको गीतमा छ्वाली (गहुँको नल) को घण्टाकर्ण बनाएर दहन गरेको उल्लेख छ । नेपाल संवत् ८१८ मा भक्तपुर तलेजुस्थित मालतीचोकमा भेटिएको शिलापत्र पनि गथेमुगको प्रसङ्ग उल्लेख छ ।
घण्टाकर्णलाई राक्षस नभएको र एकजना जनपक्षीय तथा भौतिकवादी भएको स्पष्ट धारणा राख्ने विद्वान् भने शशी शेरचन (सोनाम साथी) हुन् । उनको नेतृत्वमा प्रकाशित पर्चामा धर्म र राजाका विरुद्ध उनले विद्रोह गरे । धर्म, ईश्वर, स्वर्ग नभएको र राजा जनविरोधी भएको उनको धारणा थियो । उनी कर्ममा विश्वास गर्थे र मानवसेवा नै धर्म ठान्थे । त्यसैले धार्मिक वचन सुन्न नपरोस् भनेर मन्दिरको बाटो हिँड्दा घण्टा बजाएर हिँड्ने गर्थे । त्यसको प्रभाव जनतामा पर्न थालेपछि तत्कालीन शासकहरूले उनको हत्या गरे । त्यसपछि उनको विद्रुपीकरण सुरु गरियो । राक्षसको रूपमा पर्व मनाउन थालियो । ‘नेपाले रोग’ भनेर चिनिने कुपोषणका कारण हुने ‘रुन्चे रोग’ लाई समेत यसैसँग जोड्ने चलन धेरैपछि आएको हो । हिन्दु बहुल क्षेत्रमा रावणलाई विदू्रपीकण गरेझैँ नेपाल खाल्डोमा घण्टाकर्णको विदू्रपीकरण गरियो । त्यसप्रकारको जनविरोधी र झूठो सन्दर्भलाई विद्वान् सोनाम साथीले उल्टाउनुभयो ।
२०४८ सालमा नेकपा (एकताकेन्द्र, नेकपा (एमाले सहितको सर्वदलीय बैठक थियो । साउनको महिनामा संयुक्त आन्दोलन चलिरहेको थियो । नेपाली कांग्रेसलाई घण्टाकर्णका रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपा (एमाले बाट हुनासाथ तत्कालीन नेकपा (एकताकेन्द्रं का तर्फबाट वार्तामा सहभागी सोनाम साथीले घण्टाकर्ण राक्षस नभएको धारणा राखे । मुख हेराहेर भयो, नेकपा (एमाले का नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले “हामी पनि घण्टाकर्णलाई कहाँ राक्षस मान्छौँ र ? जनताले राक्षसका रूपमा मनाउने भएको हुनाले आन्दोलनमा उपयोग गरौँ भनेको हो”, हतारहतार भनेका थिए ।
विचार आगोको फिलिङ्गो हो जुन बाहिर आउनासाथ भौतिक शक्तिमा परिणत हुन्छ । घण्टाकर्णका विषयमा शासक वर्गद्वारा हजारौँ वर्षदेखि संस्कारका रूपमा स्थापित गरिएको घण्टाकर्णको वास्तविकता प्रकट भएको छ । यसप्रकारको अध्ययनले श्रमिक वर्गलाई विगतको बलिदानलाई वर्तमानका प्रतिरोध आन्दोलनसँग जोड्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छन् । हामी पनि गथामुग (घण्टाकर्ण पर्वका विषयमा आगामी वर्षदेखि नयाँ ढङ्गले सोच्ने कि ?
२०७४ साउन ३० गते ६ : ४५ मा प्रकाशित
बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या ७४ पुग्यो / ५० बेपत्ता, ३४ हजार घर डुबानमा